GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Korean Latvian Lithuanian Luo Malagasy Norwegian Nzema Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
ISIOKWU ỤLỌ NCHE A: È NWERE OKPUKPE NKE BỤ́ EZIGBO OKPUKPE?
Weregodị ya na ị na-arịa ajọ ọrịa, ya abụrụ na a ga-awarịrị gị ahụ́ tupu gị agbakee, ọ̀ bụ na ị gaghị achọ ka ọ bụrụ dọkịta ịwa ahụ́ doro anya ga-awa gị ahụ́ ahụ ebe ọ bụ na ndụ gị dịzi ya n’aka? Ọ bụrụkwa na ị chọrọ ịmata ma dọkịta ahụ ọ̀ makwa nke a na-akọ n’ịwa ahụ́, ị ga-agbalị chọpụta otú o sirila waa ndị ọzọ ahụ́.
E nwekwara ike ikwu na ndụ gị dịkwa n’aka okpukpe ị na-ekpe ma ọ bụ chọọchị ị na-aga n’ihi na ọ bụ okpukpe gị ma ọ bụ chọọchị gị so n’ihe ga-eme ka i nweta ndụ ebighị ebi ma ọ bụ ka ị ghara inweta ya. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ka anyị saa anya na mmiri leba anya n’okpukpe anyị na-ekpe.
Jizọs kwuru ihe ga-enyere anyị aka ịchọpụta ma okpukpe anyị ọ̀ bụ ezigbo okpukpe. Ọ sịrị: “A na-amara osisi ọ bụla site ná mkpụrụ ya.” (Luk 6:44) Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na i leruo okpukpe gị anya, olee ụdị mkpụrụ ọ na-amị? Ihe na-aka adị ndị isi okpukpe gị ma ọ bụ chọọchị gị mkpa ọ̀ bụ ego? Ndị chọọchị unu hà na-eme ihe Baịbụl kwuru gbasara ịlụ agha na ịkpa àgwà ọma? Ajụjụ ọzọ anyị kwesịrị ịjụ bụ: È nwere okpukpe nke bụ́ ezigbo ya? Anyị chọrọ ka i leba anya n’isiokwu ndị na-esonụ.
“A na-amara osisi ọ bụla site ná mkpụrụ ya.”—Luk 6:44